လိင်တူလက်ထပ်ခြင်းနှင့် လူမှုဗေဒအမြင်များ | Colors Rainbow
March 1, 2019 March 22, 2019 Kyal Sin Lin 3223 Views0Comments Waine	min read
လူမှုဗေဒရှုထောင့်အရ လိင်တူချင်း လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုအတွက် ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေဟာ အနောက်တိုင်း လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ပဋိပက္ခတွေဖြစ်စေပြီး တဖြည်းဖြည်း အရှိန်မြင့်လာရာက အောင်မြင်မှုတွေ ရလာခဲ့ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ်အတွင်းမှာဆိုရင် လိင်တူချင်း လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုဟာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းက သတ်မှတ်ထားတဲ့ စံတွေကို တရားသေ ဆုပ်ကိုင်သူတွေနဲ့ လိင်တူချင်းလက်ထပ်မှုကို လက်မခံသူတွေအတွက် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ လက်နက်တစ်ခုအဖြစ် စိန်ခေါ်လိုက်သလို ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါနဲ့တော့ ဥပဒေရေးရာ အကြောင်းအရာပိုင်းကို အပြောင်းအလဲ မဖြစ်စေခဲ့သေးပါဘူး။ အကြောင်းအရာတစ်ခုအပေါ် ထောက်ခံသူနဲ့ ဆန့်ကျင်ငြင်းခုံသူတွေနဲ့ အားပြိုင်မှုက အပြောင်းအလဲတစ်ခုကို မဖြစ်စေခဲ့သေးပါဘူး။
ဒီလို အားပြိုင်မှုတွေဟာ လူသားတွေရဲ့ အခွင့်အရေး(လူ့အခွင့်အရေး)ကို အခိုင်အမာ ကိုယ်စားပြုတာမဟုတ်ဘဲ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ တန်ဖိုးထားမှုတွေ၊ ခေတ်သစ် ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာဝါဒတွေ လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာ လိုအပ်လာနေပြီဆိုတာကို ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဗြိတိန်နိုင်ငံ (Quality and Human Right ) ရဲ့ Chairman ဖြစ်တဲ့ Trevor Phillips က လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်းမှာ ခေတ်သစ်ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ ဝါဒတွေနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ တန်ဖိုးထားမှုတွေ လိုအပ်လာနေတာကို ဖော်ပြပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ Trevor Phillips က “ရှေးရိုးဘာသာ တရား ဆုံးမမှုတွေဟာ ခေတ်သစ်လူ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ မကိုက်ညီတော့ပါဘူး”လို့ သတိပေးပြောဆိုမှုဟာ မွတ်ဆလင်ဘာသာဝင်တွေထက် ခရစ်ယာန်ဘာသာကို သက်ဝင်ယုံကြည်သူတွေကို သဘောထားကွဲလွဲစေခဲ့ပါတယ်။
Trevor Phillipsရဲ့ စကားအဓိပ္ပာယ်က လိင်တူချင်းလက်ထပ်မှုကို ဆန့်ကျင်တဲ့သူတွေဟာ ရှေးရိုးဘာသာတရား ဆုံးမမှုတွေအောက် နေထိုင်သူတွေဖြစ်ပြီး ခေတ်သစ် လူ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ ကိုက်ညီသူတွေ မဟုတ်ဘူးလို့ အဓိပ္ပာယ်ရောက်စေကြောင်း ဝေဖန်သူတွေက ထောက်ပြပြောဆိုကြပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှာတော့ လိင်တူချင်း လက်ထပ်တာကို လက်မခံတဲ့သူတွေဟာ လူ့အဖွဲ့အစည်းက လက်ခံပြီးသား ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ စံသတ်မှတ်ချက်တွေကို ရိုက်ချိုးသူများအဖြစ် လိင်တူချစ်သူများကို ပြောဆိုဖော်ပြလာကြပါတယ်။ တန်ဖိုးထားမှုတွေ၊ ခံယူချက်တွေဟာ ခေတ်သစ်လူ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ သဟဇာတ မဖြစ်ဘူးဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး Phillips ရဲ့ ပြောဆိုမှုဟာ လိင်တူချင်းလက်ထပ်သူများအပေါ် ဝေဖန်ပြောဆို ငြင်းခုံမှုတွေရဲ့အစ ဖြစ်သွားပါတယ်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာတော့ လိင်တူချင်း လက်ထပ်မှုအပေါ် အငြင်းအခုံ မေးခွန်းတွေ ထုတ်ကြတာဟာ လူအများရဲ့သဘောထား ကွဲလွဲမှုထက် တိုက်ရိုက်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုသဘောကို သရုပ်ပေါ်စေပါတယ်။ အမေရိကန် ဂျာနယ်လစ်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Hadley Freeman က Guardian သတင်းစာမှာ လိင်တူချင်းလက်ထပ်တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာဟာ ငြင်းခုံဖို့သင့်တော်တဲ့အရာ မဟုတ်ဘူးလို့ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
“ကျွန်မတို့ ယဉ်ကျေးမှု ကွဲပြားခြားနားခြင်းတွေနဲ့ အခြားသော အကြောင်းအရာတွေ အများကြီးဟာ ဆွေးနွေးပြောဆိုဖို့ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လိင်တူချင်းလက်ထပ်တဲ့ အကြောင်းအရာကတော့ ဆွေးနွေးပြောဆိုဖို့ကောင်းတဲ့ အကြောင်းတွေထဲ မပါဘူး”လို့ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
မှတ်သားဖို့ကောင်းတာကတော့ လိင်ကွဲလက်ထပ်ခြင်းတွေ တဖြည်းဖြည်း တန်ဖိုးလျော့ကျလာနေချိန်မှာ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ တင်းကျပ်မှုတွေနဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ တားမြစ်တဲ့ဝါဒတွေကြားက လိင်တူချင်း လက်ထပ်မှုအဖြစ် အသွင်ကူးပြောင်းလာကြတာဟာ တိုက်ဆိုင်မှု တစ်ခုလို ဖြစ်နေပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာ လိင်ကွဲလက်ထပ်မှုတွေကနေ အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်ခြင်းနဲ့ ကလေးအလွဲသုံးစားလုပ်မှုတွေ မကြာခဏဆိုသလို ပေါ်ပေါက်နေပြန်ပါတယ်။
UC Santa Barbara မှ လူမှုဗေဒ ပါမောက္ခ Verta Taylor က သူမရေးသားခဲ့တဲ့ “My Marrying Kind “စာအုပ်မှာ “ကျွန်မက သာတူညီမျှတဲ့ လက်ထပ်မှုအတွက် လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေကို ၂၀ဝ၄ ခုနှစ် ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်မှာ စတင်လေ့လာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနှစ်မှာ လိင်တူချစ်သူစုံတွဲ (၄၀ဝဝ)ကျော်ဟာ သူတို့ကို အသိအမှတ်ပြုပေးဖို့နဲ့ လက်ထပ်မှုကို အသိအမှတ်ပြုပေးဖို့ အမေရိကကနေ ဆန်ဖရစ္စကိုရဲ့ မြို့ တော်ခန်းမထိ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ကြပါတယ်”ဆိုပြီး လိင်တူချင်း လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုအတွက် လှုပ်ရှားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရေးသား ဖော်ပြထားပါတယ်။
Taylor ရဲ့ အဆိုအရ LGBT တွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေဟာ လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းကို အသိအမှတ်ပြုပေးဖို့ တစ်ခုတည်းအတွက် မဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ ၁၉၈၇ ခုနှစ်၊ မတ်လ ဝါရှင်တန်မှာ လိင်တူချင်းချစ်သူတွေ အခွင့်အရေးအတွက် လှုပ်ရှားမှု စတင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ လှုပ်ရှားမှုကနေ လုပ်ငန်းခွင်က အလုပ်ရှင်တွေနဲ့ ပြည်တွင်း ပြည်နယ်အစိုးရတွေက လိင်တူချစ်သူတွေကို ကာကွယ်အသိအမှတ် ပြုပေးနိုင်တဲ့ ဥပဒေနဲ့ မူဝါဒတွေ ပေါ်ထွက်လာစေဖို့ ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။ ရလဒ်အနေနဲ့ ကန့်သတ်ချက်တွေပါတဲ့ အကျိုးခံစားမှု အနည်းငယ်ကိုသာ ရရှိခဲ့ပါတယ်။
အချို့သော လူမှုဗေဒကျွမ်းကျင်သူတွေက တရားဥပဒေအရ လိင်တူလက်ထပ်ခြင်းဟာ တရားဝင်ဖြစ်သွားခဲ့ရင် လူမှုအဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာ လိင်တူစုံတွဲတွေ တဖြည်းဖြည်းများလာပြီး အစဉ်အလာအရ လိင်ကွဲလက်ထပ်သူတွေနဲ့ အမျိုးသားဝါဒကို ရှေ့တန်းတင်တဲ့ အိမ်ထောင်ရေးတွေကို ပြဿနာဖြစ်လာစေနိုင်တယ်လို့ ခန့်မှန်းသုံးသပ်ကြပါတယ်။ ဒါကိုတော့ Queer Activists တွေက လူထုထဲမှာ Queer တွေရဲ့ Identity အတွက် ပါလို့ပြောပြီး ကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့ သုံးသပ်ချက်ကို ငြင်းဆိုပါတယ်။
Taylor ကတော့ လိင်တူလက်ထပ်ခြင်းတွေ များလာတာနဲ့အမျှ အမျိုးသားဝါဒကို ရှေ့တန်းတင်တဲ့ အိမ်ထောင်ရေးတွေနဲ့ လိင်ကွဲအိမ် ထောင်ရေးတွေ နည်းသွားနိုင်တယ်လို့ပဲ သုံးသပ်ပါတယ်။ တိုရွန်တို တက္ကသိုလ်က လူမှုဗေဒ တွဲဖက်ပါမောက္ခ Adamlsaiah Green ရဲ့ ကနေဒါနိုင်ငံက တရားဝင်လက်ထပ်ခွင့်ရထားတဲ့ လိင်တူစုံတွဲတွေကို လေ့လာမှုများအရ လိင်တူလက်ထပ်သူတွေဟာ လိင်ကွဲလက်ထပ်သူတွေထက်ပိုပြီး လူသားဆန်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီကောက်ချက်ချမှုကိုတော့ အိမ်တွင်းအိမ်မှုကိစ္စများကို ခန့်ခွဲမှု၊ အိမ်ထောင်အတွင်း ငွေ သုံးစွဲမှုနဲ့ အပြန်အလှန်သစ္စာရှိမှုတွေအပေါ် လေ့လာချက်တွေအရ ပြုလုပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
လိင်တူလက်ထပ်ခြင်းအတွက် ကန့်ကွက်ပြောဆိုမှုတွေမှာ မျိုးဆက်ပြန့်ပွားရေးဟာလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ လိင်တူချစ်သူတွေ မျိုးဆက်မပွားနိုင်လို့ လက်မထပ်ရဘူးဆိုရင် အသက်ကြီးမှ အိမ်ထောင်ပြုကြသူများနှင့် ကလေးမရနိုင်သူများပါ တရားဝင်လက်ထပ်ခွင့်ရပါလျက် လက်ထပ်ခွင့်ကို ပိတ်ပင်သင့်သလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းမျိုးကို လူမှုဗေဒပညာရှင်တွေ အနေနဲ့ မေးခွန်းထုတ်ကြပါတယ်။ ဒါအပြင် မျိုးဆက်မပွားနိုင်တဲ့ အခြေအနေတူပါလျက် လက်ထပ်ဖို့အတွက် လိင်တူလိင်ကွဲ ဘာကွာခြားသလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းသာမက ဥပဒေအရ အသိအမှတ်ပြုမှုမှာ ဘာကြောင့် တရားမျှတမှုက ကွာခြားနေရသလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေ ထွက်လာပါတယ်။
လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအနေနဲ့ ယူဆရမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုအိမ်ထောင်ရေးမျိုးမဆို တစ်လင်တစ်မယားစနစ်ကို စံအဖြစ် သတ်မှတ်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ မျိုးဆက်မပွားနိုင်တဲ့ လိင်တူပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လိင်ကွဲပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်လင်တစ်မယားစနစ် ဖြစ်သင့်တယ်လို့ ပြောဆိုမှုတွေလည်း ရှိပါတယ်။ မျိုးဆက်ပွားဖို့ (သားသမီး ရယူဖို့ဆိုတာ) ဇီဝဗေဒနည်းအရ လိင်တူတွေအတွက်ရော၊ မျိုးဆက်မပွားနိုင်တဲ့ လိင်ကွဲစုံတွဲတွေအတွက်ပါ လုပ်ယူဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ Homosexuality as Infertility ဆောင်းပါးကို Willian Saletan ရေးသားခဲ့တဲ့က လိင်တူချင်း လက်ထပ်သူတွေကို ဆန့်ကျင်သူတွေက လိင်တူတွေဟာ မျိုးဆက်မပွားနိုင်ဘူးဆိုတာကို နားလည်ရင် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းထဲမှာ လူမှုရေးအရ လက်ခံနားလည်ပေးသင့်တယ်လို့ သူ့ဆောင်းပါးထဲမှာ ဖော်ပြရေးသားခဲ့ပါတယ်။ ဒါအပြင် သင်္ချာဆန်တဲ့ အယူအဆတစ်ခုကိုလည်း ဖော်ပြခဲ့ပါသေးတယ်။
၁။ လိင်တူချစ်သူ စုံတွဲများဟာ ကလေးမရနိုင်သလို မြုံနေသော လိင်ကွဲများလည်း ကလေးမရနိုင်၊ (ကွာခြားမှု မရှိ)
၂။ မြုံနေသော လိင်ကွဲစုံတွဲများဟာ ကလေးမရနိုင်ပေမယ့် တရားဥပဒေအရ လက်ထပ်ခွင့်ရကြသလို အလားတူ လိင်တူချစ်သူစုံတွဲတွေဟာလည်း တရားဥပဒေ အရ လက်ထပ်ခွင့်ရသင့်တယ်။
ကလေးမရနိုင်သူ မှန်သမျှဟာ မြုံတယ်ဆိုရင် လိင်တူ၊ လိင်ကွဲခွဲခြားမှု မရှိသင့်။ လိင်တူချစ်သူတွေဟာ သဘာဝအရ ကလေးမရနိုင်သလို လိင်ကွဲချစ်သူတွေဟာလည်း အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ကလေးမရနိုင်တာရှိတာမို့ ကွာခြားမှုမရှိ။
X က ကလေးရနိုင်သည် ဖြစ်စေ၊ မရနိုင်သည်ဖြစ်စေ X မှာ မျိုးပွားနိုင်စွမ်း သီးသန့်ပါပြီး ဖြစ်တယ်။ ဒီသဘောအရ လိင်တူချစ်သူတွေဟာ မျိုးဆက်မပွားနိုင်ဘူးဆိုတာ မဟုတ်ဘူး။
Saletanက လိင်တူချစ်သူတွေဟာ မြုံနေသူတွေလို့ ပြောတာကို ငြင်းပါတယ်။ လိင်ကွဲချစ်သူတွေမှာ တစ်ဦးက ကလေးမရနိုင်ဘူးဆိုရင် အဲဒီစုံတွဲကို မြုံနေတယ်လို့ ပြောလို့ရပြီး လိင်တူချစ်သူတွေမှာတော့ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ လိင်တူချစ်သူတွေ တစ်ဦးချင်းက မျိုးဆက်ပွားနိုင်ပေမယ့် သဘာဝတရားအရသာ ကလေးမရနိုင်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
လူမှုအဖွဲ့အစည်းနယ်ပယ်မှာ လိင်တူချစ်သူတွေကို အထိုက်အလျောက် နေရာပေးလာပေမယ့် လိင်တူချစ်သူတွေအတွက် လူမှုရေးဘောင် ကျဉ်းနေသေးပြီး သာတူညီမျှ အခွင့်အရေးတွေရရှိဖို့ ဥပဒေ အကာအကွယ်တွေလည်း အားနည်းနေသေးတယ်လို့ ကျွန်တော်မြင်တဲ့အတွက် ဒီဆောင်းပါးကို ကျွန်တော်ရေးပါတယ်။ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းထဲမှာ လိင်တူချစ်သူတွေရဲ့ ရပ်တည်မှု၊ ဖြစ်တည်မှုအပေါ် လူမှုဗေဒ ကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့ သုံးသပ်ချက်တွေ၊ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ အငြင်းအခုံတွေနဲ့ လူမှုစံသတ်မှတ်ချက် အတိုင်းအတာတွေကို ကောက်နှုတ်တင်ဆက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
1.Sociological Perspectives on Gay Marriage by Frank Furedi,a professor of sociology at the University of Kent.
2. “The marrying kind? Debating Same Sex marriage within the Lesbian and Gay Movement,” by Verta Taylor,aprofessor of sociology at UC Santa Barbara.
3.Homos exuality as Infertility by William Saletan
← နိယာမကို ဖြတ်ကျော်၍
ဘဝတူ LGBT သက်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ပထမဆုံးအကြိမ် ဂါရဝပြု ပူဇော်ပွဲ ပြုလုပ် →